Mbugharị Apple kachasị ọhụrụ gosipụtara nkwenye glucose na Apple Watch | Esi m mac
Ihe omuma ohuru nke Apple dika ikwenye nlekota glucose na Apple Watch
Anyị ejirila asịrị ruo ogologo oge banyere ọrụ ọhụụ nke Apple Watch na-esote nwere ike itinye. Anyị na-ekwu maka nyocha glucose. Na ozi dị n'elu O yiri ka o doro anya na asịrị ndị ahụ dị njọ. Ọbụghị naanị ọrụ nke ụlọ ọrụ nke atọ, ọ bụrụ na ọbụghị nke Apple. N'ezie omume ikpeazụ i mere O yiri ka ọ kwadoro na anyị ga-enwe mita ọhụrụ ahụ na nche.
Anyị ekwuola ọtụtụ oge banyere ike Apple Watch nwere maka ọrụ dị ka ndị ọrụ nzuzo. Ewezuga na o nweghị ike ịgwọ ọrịa, ọ na-eme ọtụtụ ihe ga - abara anyị uru. Ọ na - egbochi anyị na nsogbu obi, na - enyere anyị aka ma anyị daa, anyị na - edobe aka nke ọma ... wdg. Ihe ọzọ Apple chọrọ bụ inyere anyị aka ịchịkwa ogo glucose etoju anyị ma ọ dị ka ihe dị oke njọ.
Ọbụghị naanị maka akụkọ na ha abịala pụta n’iru banyere nkà na ụzụ ọhụrụ a, ọ bụrụ na ọ bụghị n'ihi na anyị ga-abanye na akaụntụ na ugbu a Apple amalitela nyocha n'etiti ndị ọrụ Apple Watch ma jụọ ha ma ọ bụrụ na ha ejiri ngwa ọ bụla soro usoro nri ha, ọgwụ ha, na ogo glucose ọbara.
Nseta ihuenyo nke nyocha ejiri ya 9to5Mac site n'aka onye na-agụ akwụkwọ Brazil, onye natara ya na email ya. Nnyocha ahụ nwere ngalaba a raara nye njirimara ahụike, nke abụrụla isi ahia nke Apple Watch kemgbe iwebata.
Na-eso ajụjụ ndị a, Apple na-ajụkwa ajụjụ ihe ngwa nke atọ iji jikwaa data ahụike. Nnyocha ahụ na-enye nhọrọ maka iji ngwa ndị ọzọ maka ịchụso mgbatị, ịdebe usoro iri nri (gụnyere hydration na nri na-edozi ahụ), na ijikwa nlekọta ahụike ndị ọzọ (dị ka ọgwụ na ọkwa nyocha nke ike). Glucose ọbara.
Anyị maara na nyocha ndị a enyerela ụlọ ọrụ aka n'oge gara aga maka ịme mkpebi. Dịka ọmụmaatụ na mwepụ nke chaja na iPhone ọhụrụ 12 na ngwaọrụ ndị ọzọ. Yabụ anyị nwere ike ịsị na nke a bụ ezigbo ezigbo isi iyi ma ọ dịkwa o yikarịrị ka na anyị nwere mita glucose ahụ na Apple Watch 7. Ihe anyị na-amaghị bụ na ọ ga-abụ mmelite ngwanrọ ma ọ bụ ngwaike. Olileanya ọ ga-abụ nke mbụ yabụ ndị ọzọ n'ime anyị nwekwara ike irite uru na ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Watch » Ihe omuma ohuru nke Apple dika ikwenye nlekota glucose na Apple Watch
Apple Developer Academy iji biri na Detroit's National National Building
Na-esote MacBook Ikuku, na agba dị iche iche dị ka ọhụrụ iMac